Xog ku saabsan Dhismaha Dekedda Hobyo - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Xog ku saabsan Dhismaha Dekedda Hobyo
February 8, 2018 admin6311 Comment on Xog ku saabsan Dhismaha Dekedda Hobyo
23 Bishii hore ayaa Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhagax dhigay dhismaha dekedda Hobyo, Kadib laba todobaad 5 bishan ayaa waxaa halkaas gaaray wafdi isugu jira Masuuliyiin dowladda federaalka iyo injineero ka socday dalka China. iyagoo u kuurgalay halka ku haboon in laga dhiso dekedda Hobyo.
Wafdiga ayaa booqday dekedda Magaalada Hobyo, Deegaanka Daamcad oo 10 km koofur ka xigta Hobyo, iyo Deegaanka Ceel Cadde oo 15 km waqooyi ka xigta Hobyo, waxaana qiimeyn kadib injineeradu cadeeyeen in Dekkadda ay ku haboon tahay halka uu dhagax dhigay Madaxweyne Farmaajo oo ah dekedda Magaalada Hobyo.
Dhankale 6 Feberaayo ayaa waxaa heshiis horudhac ah kala saxiixday wasiirka Qorsheynta dowladda federaalka Jamaal Maxamed Xasan iyo Masuuliyiin ka socday dowladda China, waxaana qalinka lagu duugay in China ay Somalia u dhisto dekedda Hobyo, Ceelhuur.com oo heshay xog ku saabsan heshiiskan ayaa waxaan ku soo koobnay nuxurka heshiiskan sidan
in China magaalada Hobyo ka dhisto dekedda ugu weyn Somalia.
Dhaqaalaha ku baxaya ayaa ah 170 Milyan oo dollar.
Dhaqaalaha 30% waxaa bixinaysa dowladda Somalia
in 3 bilood gudahood ay maraakiibta sahminta soo gaaraan dekedda Hobyo.
Heshiiskan ayaa hadda yaala xafiiska Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre, isagoo la sugayo in maalmaha soo socda qalin lagu duugo si rasmi ah, Dhismaha dekedda Hobyo ayaa la filayaa in ay ka faa’iideystaan gobalada dalka iyo dowladaha deriska.
Sidoo kale dhawaan waxaa la dhisay guddi isugu jira siyaasiyiin iyo ganacsato, kuwaas oo loo xilsaaray horumarinta Hobyo, waxayna ka shaqeyn doonaan fududeynta howlaha la xariira amniga, wadooyinka iyo dhismaha dekeddda. wixii ku soo kordha nalaga soco ceelhuur.com
January 10, 2018 January 10, 2018 Cali Yare
1 thought on “Xog ku saabsan Dhismaha Dekedda Hobyo”
Waa arinta ey Hadda Dubai Raysilwasaare khayre ey ku cadaadineyso inuusan saxiixin Heshiiska oo Somaliya eysan Deked kale yeelan, Waana midey Dowlada ey ku fashilmi laheyd,, Inta Dubai Lug kula jirto Iska iloowa Somalia,,,,